01Moa tsy ianao fantatra amin 'ny anaran' ny slot Golden Jungle? Manana ny antony rehetra ho. Zavatra tsy Casino petra-bola maimaim-poana tsy spins takiana slot lalao mitondra ho anareo rehetra marobe endrika volamena harena izay azonao ve mieritreritra ny.
Firavahanareo ny reels dia volamena vavahady, lalàna, volamena seza fiandrianana, artefacts, mavo vava vola aminy, Rehefa nandinika lalina vato soa sy ny zava-drehetra na inona na inona sy ny volamena. Zavatra tsy Casino petra-bola maimaim-poana tsy spins takiana slot nataon-Indiana foto-kevitra ara-tantara. Indiana tantara fantatra amin'ny lehibe manankarena fanjakana ny Indiana mpanjaka nirehareha ny harena rehetra heviny ny teny.
IGT mijoro for International Gaming Teknolojia, Amerikanina orinasa izay manana mahatalanjona maro nahazoan-dalana ho any ny anarany amin 'ny anaran ny slot lalao hatramin'ny 2006. Ny sary mpanakanto dia tsara-nahavita ekipana manam-pahaizana, izay mikendry mandrakariva amin'ny famoronana tsara toetra slots avo-end fihetsik'ireo sary mihetsika sy ny toetry ny kanto teknolojia.
Wild sy manahaka manana ny anjara tsara heviny mba hitondra Fandresena goavana marina ao an-paosy. Ka inona avy ireo dingana / fitambaran'ny ny marika tokony sary mahita?
LAHARAM-PAHAMEHANA, Golden Jungle slots Casino maimaim-poana tsy misy petra-bola ilaina spins lalao manana 50 paylines namorona over 5 reels. Ny hilokana Manomboka avy 50p ny namoly ny £ 1500.
Marika firavahanareo ny reels firavaka vato, artefacts toy ny sabatra, headpieces, tsara tarehy volamena voaravaka boaty, elefanta sarivongana, ary volamena vavahady. Ny tombony ambony marika dia 2 famantarana tsy hay tigra sarin-javatra izay manana ny fahafahana maro ny tsato-kazo amin'ny 40 rehefa sada 5 manerana ny reels.
Ny elefanta sarivongana dia ny bibidia raha vavahadin'ny tempoly ny volamena dia ny aelezo mariky.
Anisan'ny mampiavaka ny Casino petra-bola maimaim-poana tsy spins takiana lalao, ny famerenana ho feno raha tsy misy ny manonona ny Wild fitehenan-tanana, 4 mitendry endri-javatra. Eto, dia mila manangona 4 Idol Statue bibidia marika mba ho bibidia reels voahidy eo amin'ny efijery. Ny mihidy miraingiraingy azon'ny mijanona ho an'ny manaraka 4 spins hanangana mahatahotra mba handresena ny tsikombakomba ho anao. Ary nisy tonga ny Free Spins Bonus endri-javatra izay niteraka ny aelezo marika toy ny ao amin'ny ankamaroan'ny slot Casino maimaim-poana tsy misy petra-bola ilaina spins lalao. mahazo eo 3-5 manahaka mahatonga anao misafidy avy manaraka ireto safidy:
Noho izany, fotsiny mifidy izay tiany anao mitambatra tsara ary ianareo dia tsara ny mandeha eny amin'ny lalan'ny harena!
A folo amin'ny folo slot miaraka amin'ny ambany ny mpanelanelana amin'ny tontolo hampifandrafy mety ho an'ny rehetra, isan-karazany ny mpilalao 'safidy, IGT dia indray mandeha indray ny baolina ny hira amin'ny Golden Jungle slots Casino petra-bola maimaim-poana tsy spins ilaina.